Mpanamboatra paompy avo lenta - Mpamatsy paompy avo lenta China
Endri-javatra sy fampiharana ara-teknika lehibe: Miaraka amin'ny fomba famolavolana CAD maoderina, manana fahombiazana tsara amin'ny alikaola izy, mahomby avo lenta ary ambany ny tahan'ny akanjo. Mavesatra ny fivezivezena, tsara ny fampisehoana fanoherana ny sakana, ambony kokoa ny fahombiazan'ny rongony; Ny tombo-kase mitambatra sy ny tombo-kase mekanika miaraka amin'ny impeller mpanampy sy ny fonosana dia raisina mba tsy hisy famoahana slurry. Ny famolavolana azo itokisana dia manome antoka fa ny fotoana miasa tsy misy tsiny (MTBF) an'ny masinina iray manontolo dia nihatsara. Mampiasa menaka tsy fahita firy ...
Paompy manainga ambony 300ZGB